Inona avy no mampiavaka ny gorodona pvc? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona avy no mampiavaka ny gorodona pvc?
Ny singa tena amin'ny gorodona PVC dia polyvinyl klorida, ary avy eo ny singa hafa dia ampidirina hanatsarana ny fanoherana ny hafanana, ny fahatsapana sy ny haingony.
Ny gorodona PVC dia karazana plastika ihany koa. Ny gorodona plastika dia antsoina hoe sokajy lehibe, izay misy koa ny gorodona PVC, raha ny marina dia azo lazaina fa anarana hafa ny gorodona PVC.
Ny singa tena izy dia ny polyvinyl klorida klasika. Ny gorodona PVC dia azo atao karazana roa. Ny iray dia homogeneous sy mangarahara, izany hoe ny akora modely avy any ambany ka hatrany ambany. Ny iray hafa dia karazana mampitambatra, izany hoe, ny sosona ambony dia takelaka mangarahara PVC madio, ary ny takelaka fanontana ary ny sosona foam dia ampiana eto ambany. "Gorodona plastika" dia midika fa gorodona vita amin'ny polyvinyl klorida.
Mifandraika amin'ireo vokatra eny an-tsena, misy fitaovana maro, toy ny vokatra PVC eny an-tsena, tsy vitan'ny hoe mahazo tontolo iainana ihany, fa koa ny asany amin'ny vidiny dia avo be, ny fikojakojana dia tsotra be. Amin'izao fotoana izao, ny gorodona PVC tsy misy laka dia azo zaraina ho sokajy telo: ny hidy, magnetika, ary tsy lakaoly. Ity karazana gorodona ity dia mampihena ny vidin'ny fametrahana ary ahafahan'ny mpampiasa mankafy izany ho an'ny tenany manokana. Ho fanampin'izany, ireo karazana gorodona PVC roa, milentika ary tsy misy adhesive, dia karazana fitaovana vita amin'ny gorodona izay azo “mifindra”. Azo afindra miaraka amin'ny tompony izy io, satria tsy misy maloto io gorodona io, izay mety entina esorina sy mamindra, ary avy eo atao poavambe. .
Ny vokatry ny gorodona PVC dia tena tian'ny besinimaro ary efa nampiasaina be tamin'ny tetikasa haingon-trano any ivelany. Hatramin'ny nidirany tao an-tsena an-trano tamin'ny taona 1980 dia nohazonina tamim-pahavitrihana.Ireo varotra (biraon'ny birao, toeram-pivarotana, seranam-piaramanidina,), fanabeazana (sekoly, tranomboky, tranombarotra), fivarotam-panafody (zava-mahadomelina, hôpitaly), orinasa ary indostria hafa dia ampiasaina be, ary ny vokatra mahafa-po dia azo tanterahina. , Ny fampiasana dia mihami isan'andro.
Inona avy no mampiavaka ny gorodona pvc? Ny atiny mifandraika
Voalohany, gorodona hazo matevina Tsy ilaina ny milaza fa ny gorodona vita amin'ny hazo mateza dia matetika efa mahazatra ao an-trano, saingy maro ny olona no kivy noho ny vidiny lafo. Izy io dia mia...